Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeediyeey Golaha Barlamaanka (Sawiro) – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeediyeey Golaha Barlamaanka (Sawiro)
Maarso 27, 2019 12:55 g 0
Bismillaahi Raxmaani Raxiim
Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
Guddoonka Golaha Shacabka Ummadda Soomaaliyeed
Mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey
Guddoomiye K/xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka
Mudane Mahad Cabdalla Cawad
Guggoomiye Ku/xigeenka labaad ee Golaha Shacabka
Ra’iisul Wasaaraha iyo Golaha Wasiirrada
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare
Xildhibaannada sharafta leh ee Golaha Shacabka
Taliyayaasha iyo Saraakiisha Ciidamada Qalabka Sida
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka
Xeer Ilaaliyaha Qaranka,
Guddoomiyeyaasha Baarlamaanka Dowlad Goboleedyada, Danjirayaasha Iyo dhammaan martida kale ee sharafta leh,
Kooxda Heegan, Baambayda iyo Bahda Saxaafadda
Assalaamu Caleykum Wa Raxmatullaah Wabarakaatuhu,
Mudane Guddoomiye, Mudaneyaal iyo Marwooyin
Waxaa sharaf ii ah inaan maanta hortiinna imaado aniga oo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah ee furitaanka kalfadhiga shanaad ee Golaha Shacabka Federaalka Soomaaliya.
Dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad adag oo u baahan in Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, dowlad iyo shacabba, ay gacmaha isu qabsadaan sidii ay u samatabixin lahaayeen dalkooda iyo dadkoodaba.
Sidaad la socotaan, waxaan waqti dheer dagaal marxalado badan soo maray aan kula jirnay kooxaha argagaxisada ah oo mar walba u taagan inay daadiyaan dhiigga shacabka ummada Soomaaliyeed, waxayna usbuucan Muqdisho ku gumaadeen shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan iyo masuuliyiin uu kamid ahaa Alle ha u naxariistee Xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla. Ilaahay waxaan ugu baryeynaa inuu intii shahiidday jannadii iyo naxariistiisii siiyo, inta dhawaacanytayna uu caafimaad buuxa siiyo.
Mudane Guddoomiye, Mudaneyaal iyo Marwooyin,
Dagaalkaani ma ahan mid aan annagu doorannay, laakiin waa mid aan ku qasbannahay, waana inaan ku guulaysannaa intay rabto ha nagu qaadato. Sidaas awgeed dowlad iyo shacabba waa inaan u midownaa sidii aan u tirtiri lahayn argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka.
Waxaa sidaan horey idiin kugu ballan qaaday oo naga go’an in aan siinno amniga ahmiyadda ugu wayn. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si dhaw ula shaqeeyaan laamaha ammaanka oo ay la wadaagaan xogaha iyo dhaqdhaqaaqyada cadowga – argagixisada ah.
Dalka wuxuu ku jiraa dagaal muddo ka badan 10 sano, dagaalkuna wuxuu wataa dhaqaale xumo, dhaawac badan iyo dhimasho. Waa inaan adkaysanno, waa inuu mooraalkeenu sarreeyo oo aan caradeenna ku wajahno cadowga, marna Shacabkeennu yeynan ogolaan in la qalbi-jabiyo. Ummadda Soomaliyeed wax badan ayaa la isku dayey in la qab-jabiyo oo ay is-dhiibaan, laakiin ma dhicin, waana diideen in ay is dhiibaan. Guusha waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo xaq u dirirka ah oo nabadda jecel, Cadowgu wuxuu marayaa meeshii ugu dambeysay markii lala barbardhigo meeshii ay joogeen 10 sano kahor, waxayna ku jiraan baqdin iyo ay ku dhuumaalaystaan shacabka dhexdiisa si ay u geystaan xasuuq cidna aysan u naxin- caruur iyo cirroolaba. Waxaan hubaa in aan ka guulaysan doonno cadowga. Guusha waxaa nooga hartay oo kaliya wakhti yar iyo adkaysi. Amnigu siyaasad ma galo waana masuuliyad wadareed, qof walba oo muwaadin ahna door ayuu ku leeyahay inta ay fdoonto hala ekaatee.
Waxaa hubaal ah in shaqo badan looga baahan yahay dhinaca ammaanka iyo la dagaallanka argagixisada. Sidaa darteed, annagoo ku xisaabtamayna marxaladaha adag ee dalkeennu ku jiro dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo bulsha ahaanba, waxaan qorshaynay inaan isbeddello la taaban karo iyo dib-u-habayn ku samayno laamaha ammaanka ee dalka, sida Ciidanka Xoogga Dalka, Booliiska iyo Hay’adda Sirdoonka Qaranka.
Si loo dejiyo qorshayaal ciidan oo si rasmi ah uga hor taga argagixisada, waxaan bilownay diiwaangelinta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kuwaasoo intii horey loo diiwaan geliyey ay mashaaraadkooda si toos ah ugu helaan koontooyinkooda. Waxaan sidoo kale socota in la dhammaystiro inta harsan si ay ayaguna xuquuqdooda si toos ah ugu helaan insha Allaah sida ugu dhakhsiyada badan.
Waxaan Xukuumadda ku bogaadinayaa dadaallada ay ka waddo dib-u-habaynta hannaanka maaliyadda ciidanka, si uu askari walba xuquuqdiisa toos ugu helo. Ciidanku waxa ay leeyihiin ahmiyadda ugu horraysa ee mushaar bixinta, laakiin waa in askari walba la diiwaangeliyaa si aan u ogaanno tirada dhabta ah iyo sida ay u hawl galayaan.
Mudane Guddoomiye, Mudanayaal iyo Marwooyin
Dhinaca hirgelinta sharciyada; labadii sanno ee uu maamulkaygu jiray waxaan saxiixay labo sharci oo kaliya, halka 29 hindise-sharciyeed oo kale ay horyaallaan labada Gole ee Baarlaamaanka. In badan oo kamid ah shuruucdaas waxay muhiim u yihiin hirgelinta howlaha dowladda, sida la dagaalanka argagixisada, la dagalaanka musuqmaasuqa, sharciga maamulka maaliyadda iyo xaqsiinta ciidamada oo aad iyo aad muhiim noogu ah. Sidaas awgeed, waxaan si xushmad leh labada gole uga codsanayaa inay dedejiyaan hirgelinta iyo ansixinta sharciyadaas iyo kuwa kale ee muhiimka u ah howlaha dowladda.
Muddadii labada sano ahayd ee aan xilka hayey waxaan xoogga saaray kobcinta dhaqaalaha dalka, hadday noqoto sidii aan adduun-weynaha uga heli lahayn in nalaga cafiyo deymaha, iyo hadday noqon lahayd inaan kor u qaadno dakhliga gudaha ee dalka.
Dhinaca cafinta daymaha, waxaan si hufan uga soo baxnay dhammaan shuruudahii nalagu xiray iyo yoolalkii aan kula heshiinnay hay’adda lacagta adduunka ee IMF si nalooga cafiyo deymahaas.
Dhinaca dakhliga Dowladda, waxaan sanadkii lasoo dhaafay dakhliga dowladda kor u qaadnay boqolkiiba 30%, marka loo eego sanadkii ka horreeyay. Dakhliga sanadka 2017 waxa uu ahaa $142.6m, halka sanadkii la soo dhaafay uu gaaray $184m; waxaana rajaynaynaa in sanadka 2019 uu dhaqaaluhu intaas kasii badnaado Insha Allaah.
Si loo yareeyo halista ka imaan jirtay lunsashada ama musuqmaasuqa dakhliga dowladda, waxaan dib-u-habayn ku samaynay habkii ururinta dakhliga, waxaana ururinta dakhliga dowladda ku gaar yeelnay Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalka, gaar ahaan Bangiga Dhexe, halka markii hore ay ururin jireen hay’ado badan oo dowli ah.
Sidoo kale, waxay dowladdu si rasmi ah dib ula soo wareegtay Astaanta Qaranka ee Internet (.so); waxaan dib usoo ceshannay xubinnimadeennii Ururka Caalamiga ee Isgaarsiinta. Waxaan dajinnay qorshaha 5-ta sano ee isgaarsiinta & teknolojiyada qaranka; Waxaan dhisnay Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka; Waxaan dhammaystirnay Sharciga Shirkadaha (Company Law) iyo kan Hantidhowrka guud.
Dhammaan howlahaas aan kor kusoo sheegay waxay udub-dhexaad u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo dib u nabadeynta dalka guud ahaan. Waxaan rajaynayaa in aan guul wayn oo wax ka-beddesha nolosha iyo mustaqbalkeenaba aan ka gaari doonno dib u dhiska dhaqaalaha iyo mashruuca dayn cafiska.
Dhinaca Siyaasadda, waxaan xoogga saarnay sidii ummadda Soomaaliyeed horumar uga gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay. Waxaa Alle mahaddiis ah in annagoo wada jirna ay noo suurta gashay inaan go’aan siyaasadeed ka gaarno nidaamka doorasho iyo degaan doorasho ee dalka iyo sidoo kale qayb-siga khayraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waxaan dhammaystirnay Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka iyo dib-u-eegista Sharciga Xisbiyada Siyaasadeed oo muhiim u ah geedi-socodka dimuqraadiyadaynta dalka.
Si loo qabyo-tiro Dastuurka KMG ah, waxaan diyaarinnay dhammaan xulashooyinka Qodobada Dastuurka ee ay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ka wada xaajoon doonaan oo ay kamid yihiin; Maqaamka ay Magaalo Madaxda Muqdisho ku dhex yeelanayso hannaanka Federaalka, qaab-dhismeedka dowladda, asteynta awoodaha dowladda, hannaanka dowladeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hannaanka caddaaladda iyo asluubta federaalka ah, qaabeynta iyo qaan-gaarsiinta Dowlad Goboleedyada KMG ah, nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada, iyo weliba hannaanka federaaleynta maaliyadda. Howlahaas oo loo aayi doono boqolaalka sano ee soo socda.
Waxaan u mahad celinayaa guddigga Baarlamaanka labadiisa aqal ee Dastuurka iyo Guddiga Madaxa Bannaan ee dastuurka oo dhammaystiray qabyo qoraalka 10-ka cutub ee dastuurka. Waxaan ku bogaadinayaa howsha ay qabteen iyo wada shaqaynta ka dhexaysa Wasaaradda Dastuurka iyo labada guddi. Waxaan ku dhiirrigelinayaa labada guddi iyo Xukuumaddaba in ay sii dardargeliyaan howsha ay hayaan si loo dhammaystiro 5-ta cutub ee ka hartay Dastuurka. Waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday Wasiirkii hore ee Dastuurka Marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo dadaal ku bixiyay sidii Dastuurka loo dhammays tiri lahaa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in uu naxariistiisa iyo jannadiisa siiyo.
Waxaa sidoo kale xusid mudan, in bishii Juun ee sannadkii la soo dhaafay ay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyadu ku heshiiyeen hanaanka khayraad wadaagga dalka.
Mudane Guddoomiye, Mudanayaal iyo Marwooyin,
Dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee maamulkayga. Sidaas awgeed, waxaan rabaa inaan idinla wadaago in Golaha Wasiirada ay u suurta gashay in ay ansixiyaan Hannaanka Dhab-u-heshiinta Qaranka iyo Qorshe hawleedkiisa fulineed si loo qaabeeyo, loona dardargeliyo dadaallada dib-u-heshiinta ee dalka ka socda.
Dhanka kale, waxaa naga go’an inaan ka mira dhalinno wadahadallada Maamulka Somaliland iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya si xal waara loogu helo tabashooyinka walaaleheen Somaliland. Waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan diyaar u nahay inaan si waafi ah uga garawno tabashooyinka ay qabaan walaaleheenna reer Somaliland.
Kalfadhigaan wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu meel fiican marayo xiriirka wada shaqayneed ee u dhexeeya Dawladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada, taas oo qayb weyn ka qaadan doonta xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed, waxaana naga go’an inaan sii xoojinno wada shaqayntaas hadduu Eebe yiraahdo.
Waxaan bogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay Dowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland, waxaana ku kalsoonahay in doorashooyinka Jubaland iyo Galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyay ku qabsoomi doonaan.
Siyaasaddeenna arrimaha dibedda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada caalamka, iyada oo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan Shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimadeenna, madaxbanaaniddeena iyo ilaalinta xuduudeheenna dhulka, badda iyo cirkaba.
Xiriirka aan la leennahay waddamada derisku waa mid ku dhisan iskaashi xooggan oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wadaqabsi siman ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada.
Soomaaliya waxay bud-dhige u tahay dadaallada lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika. Ujeeddooyinka iskaashiga waddamada Geeska Afrika waa in waddamada Geeska Afrika ay horumar waara ka gaaraan dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada, siyaasadda iyo bulshada.
Waxaan ugu danbeyntii Guddoonka Golaha Shacabka mar kale ka codsanayaa inay meel-mariyaan Hindise-sharciyeedda kala duwan ee horyaalla.Kalfadhigii shanaad ee Golaha Shacabkuna waa inoo furan yahay, maanta oo ah Maarso 27, 2019.
Waa mahadsan tihiin.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo dhaliilay Hay’addaha Puntland ka howlgala (Daawo)
Biyo la’aan laga soo sheegayo degaano ka tirsan Gobalka Sanaag (dhegayso|daawo)